OnePlus wuxuu xaqiijinayaa jadwalka cusbooneysiinta Android 10 | Androidsis
OnePlus ayaa noqday mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee cusboonaysiinta. Mid ka mid ah faa'iidooyinka ayaa ah in buugga taleefankoodu yar yahay, kaas oo iyaga siinaya awood ay ku cusboonaysiiyaan taleefannadooda si dhakhso leh. Shirkaddu waxay horeyba uga shaqeyneysaa cusbooneysiinta Android 10 taleefannadeeda. Hadda waxay nooga tegayaan kalandarkooda rasmiga ah.
Shirkadda ayaa durbaba hawlgalinaysa Android 10 telefoonada qaarkood, sida OnePlus 7 iyo 7 Pro. Hadda waxay nooga tageen taariikhaha aan ka filan karno in moodooyinka intiisa kale ee kaydkooda ay heli doonaan. Marka isticmaaleyaashu horeyba way ogyihiin goorta ay filayaan.
Maamulaha guud ee shirkada ayaa horey u xaqiijiyay taariikhaha cusbooneysiinta ee Android 10 taleefannadooda. Sidaa darteed, dhammaan isticmaaleyaasha leh mid ka mid ah moodooyinkaas nooca Shiinaha ah, horeyba way ogyihiin goorta ay filan karaan inay ku helaan taleefannadooda casriga ah. Taariikhu waa sida soo socota:
OnePlus 7 iyo 7 Pro: Cusboonaysiinta caalamiga ah ayaa durba la geeyay maanta
OnePlus 6 iyo 6T: Beta bulshada ayaa la sii deyn doonaa dhamaadka Oktoobar iyo nooca xasilloon dhamaadka bisha Nofeembar
OnePlus 5 iyo 5T: Cusbooneysiinta waxaa la sii deyn doonaa rubuca labaad (inta u dhaxeysa Abriil iyo Juun) ee 2020
Tani waxay horeyba nooga dhigeysaa mid aad u cad arrintan, dadka isticmaala kuwa leh nooc kasta oo soosaarayaasha ah. Mid ka mid ah warka wanaagsan ayaa loogu talagalay kuwa leh OnePlus 5 iyo 5T. Sida taleefannadan ayaa si rasmi ah u heli doona Android 10, in kastoo ay horayba uga maqnaayeen wareegga cusboonaysiinta. Laakiin waxaa la sheegi doonaa cusbooneysiin kiis kasta.
Sidaa darteed, waa arrin kaliya oo hadda la sugayo Telefoonada shirkadu waxay horey u heli jireen Android 10. Kuwii ugu horreeyay ayaa horeyba u socday, halka moodooyinka sanadkii la soo dhaafay ay sugi doonaan in yar ka badan bil si ay ugu dambeyntii u helaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » OnePlus wuxuu xaqiijinayaa jadwalka cusbooneysiinta ee Android 10